နတ်မောက်သားတို့ ဂုဏ်ယူစရာ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ တခေါက် | ဧရာဝတီ
နတ်မောက်သားတို့ ဂုဏ်ယူစရာ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ တခေါက်
နန်းဆိုင်နွမ်| December 13, 2012 | Hits:8,391
4 | | နတ်မောက်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနေသူများ (ဓာတ်ပုံ – နန်းဆိုင်နွမ်/ ဧရာဝတီ)
ကွေ့ကောက်ပြီး ဖုန်တလူလူထနေသည့် အညာဒေသ နတ်မောက်မြို့၏ ကတ္တရာလမ်း ဘေးဘယ်ညာတွင် ထန်းပင်များ၊ ပဲပင်၊ ငရုတ်ပင်များ ၀န်းရံ စိုက်ပျိုးထားသည်။ ထိုလမ်းပေါ်တွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ငယ်စဉ်က နေထိုင်ခဲ့သည့် နေအိမ်ရှိပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေထိုင်ခဲ့သည့် အိမ်သည် ရေနံချေး ဝအောင် သုတ်လိမ်းထားသည့် သစ်သားများဖြင့် ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားကာ “ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်း သုတေသန၊ အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနက ဦးစီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်၊ နတ်မောက်မြို့” ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ် ထူထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
နေအိမ်ပြတိုက် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သွားသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ် ပြန်လည်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ၀င်ကြေးအဖြစ် နိုင်ငံသား တဦးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်နှင့် နိုင်ငံခြားသား တဦး အတွက် ၃၀၀ ကျပ် ကောက်ခံလျှက် ရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေအိမ်သည် ခြေတံရှည် နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြစ်ပြီး အောက်ထပ်တွင် ဝါးထရံဖြင့် ကာရံထားသည်။ အောက်ထပ် အိမ်ရှေ့ တံခါးဝတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိဘဆွေမျိုးများ အသုံးပြုခဲ့ပုံရသည့် ပဲ၊ နှမ်းလှောင်လေ့ ရှိသော ပုတ်အကြီး တခုကို ချထားသည်။
နေအိမ်ပြတိုက်အတွင်း ၀င်ရောက်သွားသည့် အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ငယ်ဘ၀ ဓာတ်ပုံများ၊ ကျောင်းသားဘ၀ ဓာတ်ပုံများ၊ မိသားစု ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းဝင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် တော်စပ်သည့် နာမည်စာရင်းများကို ချိတ်ဆွဲပြသထားသည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေအိမ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် မီးခံသေတ္တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းအရ ကိုထိန်လင်းခေါ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဘိုးဘွားများမှာ ပုဂံမင်းသမီးတပါးမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းသည် ဦးဖာနှင့် ဒေါ်စုတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်၏ ညာဘက်ဘေးတွင် ယခင်က ပစ္စည်းထားခဲ့ပုံရသည့် ဂိုဒေါင်ပျက် တခုကိုလည်း တွေ့ရသည်။
နေအိမ်၏ အပေါ်ထပ် ဘုရားခန်းရှေ့တွင်မူ ပက်လက် ကုလားထိုင်တလုံး ချထားပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စာဖတ်သည့် နေရာဟု စာတန်းထိုးထားသည်။
အပေါ်ထပ်ကို အိပ်ခန်း ၄ ခန်းနှင့် စားဖိုခန်း တခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ခေါင်းရင်းခန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်လာစဉ် အိပ်ခန်း၊ ၎င်း၏ ဘေးခန်းတွင် မိခင်အိပ်ခန်း၊ မိသားစုခန်း၊ အပျိုခန်းဟု၍ ရေးသားချိတ်ဆွဲ ထားသည်။
နတ်မောက်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်ကို လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုသူ တနေ့လျှင် ပျမ်းမျှ ၃၀ ဦးခန့် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
“ပုံမှန်တော့မရှိဘူး။ ပျမ်းမျှဆိုရင်တော့ ၃၀ လောက်တော့ရှိတယ်။ တခါတလေလည်း ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ လာတဲ့သူ အများဆုံးကတော့ မကွေးခရိုင် ၀န်းကျင်က ဒေသခံတွေပါ” ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြတိုက်တွင်ဝင်ကြေး ကောက်ခံသည့် နတ်မောက်သူ မမြမဉ္ဇူက ပြောပြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇာတိနေအိမ်တွင် ၎င်း၏ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက် တချို့ကို ချိတ်ဆွဲထား သကဲ့သို့ သခင်အောင်ဆန်း အဖြစ်နှင့် ဂျပန်ပြည်တွင် စစ်ဘက် အာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း လာရောက် လေ့လာသူများ အသေးစိတ် သိရှိစေရန်အတွက် ရေးဆွဲ ချိတ်ထားသေးသည်။
“တိုင်းသူပြည်သား လူအများဟာ ဥမကွဲသိုက်မပျက် တညီတညွတ်တည်း စည်းကမ်းတကျ ရှိဖို့လိုတယ်။ မိမိတို့အဓိကပန်းတိုင်ကို မျက်ခြည်ပြတ် မခံဘဲ လမ်းမလွဲအောင် ကြိုးစားဖို့လိုတယ်” “လူထုညီညွတ်မှု၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ညီညွတ်မှု တွေကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမယ်” “ပဒေသာပင်ပေါက်အောင် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်” စသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းများကို တွေ့ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကို လာရောက် လေ့လာသည့် သီလရင် ဆရာလေးတပါးက “ဆရာလေးက ဒီ မကွေးခရိုင်ထဲက ပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကို ဒါ ပထမဆုံး ရောက်တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖော်ပြလို့ မရအောင် ၀မ်းနည်းတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်ကို လာရောက်လည်ပတ်ကြသူများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေအိမ်အကြောင်း၊ ၎င်း၏ ငယ်ဘဝ ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ကာ မည်သို့ နေထိုင်ခဲ့သည် ဆိုသည့်အကြောင်းနှင့် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နာမည် စာရင်းများကို သိရသဖြင့် အလွန် ၀မ်းမြောက်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်ကို မပျက်မစီးအောင် ထိန်းသိမ်းထားကာ ကြည့်ရှုခွင့် ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးခရိုင် နတ်မောက်မြို့ရှိ နေအိမ်တွင် ၁၉၂၉ ခုနစ်အထိ နေထိုင် ခဲ့ကြောင်း၊ ၇ နှစ်သား အရွယ်မှစ၍ နတ်မောက်မြို့ရှိ ဒီပင်္ကရာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် စာသင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ၁၄ နှစ် အရွယ်တွင် ရေနံချောင်းမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ နေအိမ်ဝန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိခင် ဒေါ်စုနှင့် သူ၏ မောင်နှမ သားချင်းများ နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အိမ်ခြံဝန်းကြီးတွင် စုပေါင်းနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်၏ ဖခင်ဦးဖာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အိမ်ကြီးတွင် အစ်ကိုအကြီးဆုံးဖြစ်သူ ဦးနေအောင်က မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ ဆက်လက် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဦးနေအောင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သားဖြစ်သူ ဦးအောင်မြင့်သိန်းက ဆက်လက် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၇၃ ခုနစ်တွင် ဦးဘ၀င်း၏ဇနီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီးနှင့် ဦးအောင်သန်းတို့က အဆိုပါ နေအိမ်ကြီးအား နိုင်ငံတော်သို့ လှူဒါန်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြသဖြင့် ဦးအောင်မြင့်သိန်းက ၁၉၇၃ ခုနစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ နေ့ရက်တွင် လှူဒါန်းခဲ့ရာမှ စတင်၍ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း အစရှိသည်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သိရသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင် နတ်မောက်တမြို့လုံး မီးကြီး လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ မီးလောင်ပြီးနောက် မြေကွက်များ ပြန်လည်နေရာချထားပေးချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဆွေမျိုးများက ယင်းတို့၏ မူလအိမ် နေရာများကို ပြန်မယူတော့ဘဲနိုင်ငံတော်သို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် နတ်မောက်မြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးဌာနက မူလပုံစံအတိုင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနစ်တွင် မြို့နယ် ပါတီယူနစ်နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာ ပါတီကောင်စီမှ တဆင့် နေအိမ်ပြတိုက်ကို ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နတ်မောက်မြို့ခံတဦးဖြစ်သူ ဦးလှဌေးက “နတ်မောက်မှာက ဘာမှတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြစရာမရှိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ် ပြတိုက် တခုပဲ ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် နေအိမ်ရှိတော့၊ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတိ ဖြစ်တော့ နတ်မောက်သူ နတ်မောက်သားတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ထူးခြားသော မြင်ကွင်းများနဲ့ မိုင်းလားမြို့
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe December 13, 2012 - 10:20 pm	Then, the house is justareplica, not the real one.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 14, 2012 - 3:37 am	ပထမဦးစွာ သည် သတင်းဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့တဲ့ နန်းဆိုင်နွမ်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။ သည်သတင်းဆောင်းပါးလေးကို ရေးဘို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာ၊ အကောင်အထည်ဖေါ် ရေးသားခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက်နောင်လဲ သည်လို တန်ဘိုးရှိတဲ့ စာ၊ သတင်းတွေနဲ့ သတင်းလောကမှာ ပိုမို အောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းအားပေးပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ် ပြတိုက်ဟာ နတ်မောက် နယ်သူနယ်သားတွေသာမက တတိုင်းပြည်လုံး တမျိုးသားလုံး ဂုဏ်ယူစရာ ပြတိုက်တခုပါ။ ဘိုးဘွားပိုင် မြေကို နိုင်ငံတော်ကို လှုတန်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အန်တီစု တို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို အလွန် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အပြုသဘော နှစ်ခု အကြံပေးပါရစေ။ ၁) စာတမ်းတွေကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်လဲ ထားသင့်ပါတယ်။ ၂) ၀င်ကြေးကို မြန်မာပြည်သားများကို ကျပ်၂၀၀ ကောက်ခံတာ ဘာမှ မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားများကို ကျပ် ၃၀၀ ဆိုတာ အလွန် နည်းပါတယ်။ သူများတိုင်းပြည်မှာ ပြတိုက်တွေ ၀င်ကြေး အလွန် ဈေးကြီးပါတယ်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေလဲ အလွန်များပါတယ်။ ဟိုဟာ မကိုင်ရ၊ သည်ဟာ မကိုင်ရ၊ ပန်းချီကားများဆိုရင် မီးရောင်နဲ့ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရ (No Flash) ဆိုတာမျိုး။ သည်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ၀င်ကြေး အနည်းဆုံး ၈၀၀ ကောက်သင့်ပါတယ်။ တဒေါ်လာတောင် မရှိပါ။ တထောင်တောင် ကောက်သင့်ပါတယ်။ ရတဲ့ ငွေနဲ့ အောက်ထပ် သံမံတလင်း ခင်းသင့်တယ်။ (ပုံထဲမှာ မြေကြီး သလင်းတွေ့ရတယ်)။ ခြံထဲက ဂိုဒေါင်ပျက် ပြင်ဘို့၊ ခြံထဲမှာ သစ်ပင် ပန်းမာလ် စိုက်ဘို့။ နောက်ပြီး နောက်ပိုင်း အလည်လာသူများလျှင် အိမ်ပေါ် အတက်များလျှင် အိမ်နာနိုင်ပါသည်။ အချို့တိုင်းပြည်များမှာ ပြတိုက်အို၊ အသေးများဆိုလျှင် အလည်လာရောက် လေ့လာသူများကို တခါ တက်ကြည့်မှ ၁၀ ယောက်၊ ၁၅ ယောက် သတ်မှတ်ထားပြီး အလှည့်မကျသေးသူများ စောင့်ရန် ခြံထဲတွင် ဧည့်သည် နားနေဆောင်၊ ဧည့်သည် အိမ်သာခန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်သော၊ ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်နဲ့ ပတ်သက်သော၊ နတ်မောက်နယ်နဲ့ ပတ်သက်သော အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် ဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။ information flyer လေးတွေ ဝေငှတာ၊ ပြတိုက်မှာ လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြဘို့ ဧည့်လမ်းညွှန် ထားသင့်ပါတယ်။ နန်းဆိုင်နွမ်မှ တဆင့် အကြံပေး ပေးပါ။ အရင်က နေ၀င်း အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်ခဲ့လို့ လူသိနည်း ၊ လူအလာ နည်းခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုလျှင် လူအလာ များတော့မှာပါ။ ကျောင်းတွေကလဲ ကလေးတွေ လာတော့မှာပါ (ကျောင်းက လေ့လာရေးဆိုရင် ၀င်ကြေးက အုပ်စုကြေး တမျိုး ကောက်ပေါ့)။ tourist attraction တခု ဖြစ်အောင် အဆင့်မီ ဧည့်သည်နားနေခန်း၊ အိမ်သာတွေနဲ့ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 14, 2012 - 3:38 am	ပထမဦးစွာ သည် သတင်းဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့တဲ့ နန်းဆိုင်နွမ်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။ သည်သတင်းဆောင်းပါးလေးကို ရေးဘို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာ၊ အကောင်အထည်ဖေါ် ရေးသားခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက်နောင်လဲ သည်လို တန်ဘိုးရှိတဲ့ စာ၊ သတင်းတွေနဲ့ သတင်းလောကမှာ ပိုမို အောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းအားပေးပါတယ်။
အပြုသဘော နှစ်ခု အကြံပေးပါရစေ။ ၁) စာတမ်းတွေကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်လဲ ထားသင့်ပါတယ်။ ၂) ၀င်ကြေးကို မြန်မာပြည်သားများကို ကျပ်၂၀၀ ကောက်ခံတာ ဘာမှ မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားများကို ကျပ် ၃၀၀ ဆိုတာ အလွန် နည်းပါတယ်။ သူများတိုင်းပြည်မှာ ပြတိုက်တွေ ၀င်ကြေး အလွန် ဈေးကြီးပါတယ်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေလဲ အလွန်များပါတယ်။ ဟိုဟာ မကိုင်ရ၊ သည်ဟာ မကိုင်ရ၊ ပန်းချီကားများဆိုရင် မီးရောင်နဲ့ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရ (No Flash) ဆိုတာမျိုး။ သည်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ၀င်ကြေး အနည်းဆုံး ၈၀၀ ကောက်သင့်ပါတယ်။ တဒေါ်လာတောင် မရှိပါ။ တထောင်တောင် ကောက်သင့်ပါတယ်။ ရတဲ့ ငွေနဲ့ အောက်ထပ် သံမံတလင်း ခင်းသင့်တယ်။ (ပုံထဲမှာ မြေကြီး သလင်းတွေ့ရတယ်)။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 14, 2012 - 3:49 am	(ပထမစာမှာ ရေးရင်းနဲ့ လိုင်းပြတ်သွားလို့ ဆက်ရေးတာပါ)
ရရှိတဲ့ငွေနဲ့ ခြံထဲက ဂိုဒေါင်ကို ပြင်သင့်ပါတယ်။ ခြံထဲမှာ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေ စိုက်ဘို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ကဏ္ဍ မှေးမှိန်အောင် ထားခဲ့လို့ လူလာ နည်းပေမယ့် အခု ပြည်တွင်းကလူတွေတင်မက၊ tourist တွေပါ လာကြတော့မှာမို့ ဧည့်သည် နားနေဆောင်၊ ဧည့်သည်တွေအတွက် သန့်ရှင်းသပ်ယပ်တဲ့ အိမ်သာဆောက်ထားရတော့မှာပါ။ နောက်ပြီး အိမ်မပျက်ဆီးအောင် အိမ်ပေါ် တခါ တက်ရင် ဧည့်သည် ၁၀ ယောက် ၁၅ ယောက်ပဲ သတ်မှတ် တက်ခွင့်ပေးပြီး အလှည့် မကျသေးသူတွေက ဧည့်သည်ဆောင်ထဲမှာ ထိုင်စောင့်သင့်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ် အိမ်၊ နတ်မောက်နယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလေးထားပြီး ပြတိုက် ထိမ်းသိမ်းဘို့ ငွေရှာရပါမယ်။ အခု ဧည့်သည်တွေ များတော့မှာပါ။ ကျောင်းတွေက ကလေးတွေလဲ လေ့လာရေး လာကြသင့်ပါတယ်။ (သည်အခါ ၀င်ကြေးက အုပ်စု ကြေး တမျိုးပေါ့)။ နန်းဆိုင်နွမ်မှ အကြံပေးစာ ပို့ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။